दश नङ्ग्रा खियाएर मिहिनेत गर्ने किसानलाई बिचौलिया देख्ने आँखालाई यो आँशुले पक्कै पोल्छ सरकार ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दश नङ्ग्रा खियाएर मिहिनेत गर्ने किसानलाई बिचौलिया देख्ने आँखालाई यो आँशुले पक्कै पोल्छ सरकार !
दश नङ्ग्रा खियाएर मिहिनेत गर्ने किसानलाई बिचौलिया देख्ने आँखालाई यो आँशुले पक्कै पोल्छ सरकार !
admin December 16, 2020 December 16, 2020 समाचार	0
एजेन्सी । नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा नै निर्भर छन् । कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड नै हो । नेपालमा करिब ८० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको मुख्य पेशा कृषि नै हो । सदिऔंदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर भनिदैं आएको छ । नेताहरूले कृषि क्रान्तिका ठूल्ठूला भाषण गर्छन् । कार्यपत्र र कार्यनीति बनाइन्छ ।
साँच्चै नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनी पहिचान दिने हो भने कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । हजारौं हजार आयोजनाको आवश्यकता पनि छैन । एउटा ठोस नीतिको आवश्यकता छ । नत्र भने कृषिप्रधान देश नाम मात्रमा सीमित रहला ।
भगवान जस्ता श्रीमान ! श्रीमतीका लागि घरलाई अस्पताल बनाए, कोठालाई आइसीयू र कारलाई एम्बुलेन्स
गोंगबुमा इनकाउन्टर गर्ने प्रहरी बारे आयो सबैलाई चकित पार्ने खबर – पुरा हेर्नुहोस